ऊ...तुलसी घिमिरे :: Press Chautari ::
ऊ तुलसी घिमिरे ।
जो मेची पारी भारतको कालीम्पोङ्मा जन्मे तर मेची वारी नेपाललाई कर्म थलो बनाए । साँढे तीन दशक भन्दा बढि लामो समयदेखि नेपाली रजतपटमा निरन्तर क्रियाशील रहदै आएका घिमिरे उमेरले पाको भएपनि उनी अझै गलेका छैनन् । अहँ उनी पटक्कै थाकेका छैनन् । यसैले त उनी त्यहि कर्मथलोमा निरन्तर नेपाली माटोको सुवास मग्मगाउने सिर्जनामा तल्लिन छन् । सत्तरीको उकालो उक्लिदै गरेका उनी आजीवन नेपाली चलचित्र जगतको श्रीबृद्धिमा समर्पित भई नदि बनेर बगिरहेकाछन् । अग्लो पहाड भएर उभिई रहेकाछन् । र त छेकी रहेछन् खहरेका बेग र बेमौसमी बतासहरु ।
तुलसी घिमिरेका लागि भूगोल र राष्ट्रियता भन्दा आफ्नो जाति, भाषा र कला माथि रह्यो । अनि त यसैको श्रृबृद्दिको निम्ति मनभरी नेपाल बोकेर मेची तरे । मौलिक नेपाली कला र संस्कृति उता मेची पारी नमिसाई यतै रोेप्न चाहे । वाह ! आफ्नो जाति र भाषाको कत्रो मोह उनीभित्र ? त्यसैले त राष्ट्रियता मेची पुलपारी नै छाडेर हरेक नेपालीको हृदय छुने सिर्जनाभित्र सिंगो नेपाललाई छातीमा टाँसे । भन्नेहरुले 'पारीको मान्छे' भने पनि आफुलाई यहि देशको छोरो ठाने । यसकारण-उनको नशाा, रगत र धमनीहरुमा नेपाल सिंचित थियो ।
आफ्ना आमा बाबुको सालनाल गाँडिएको भूमीमा आएर उनले नेपाली रजतपटमा धेरै उत्कृष्ट र स्तरिय चलचित्रहरु दिएकाछन् । जन्मलाई भूगोलको सिमानाले छुट्टायो त के भो ? कर्मले यो देशको स्वाभिमान सगरमाथा जत्तिकै अग्लो उभ्याँइ दिएकाछन् । राष्ट्र प्रेम भन्ने कुरा कुनै घर-दरबार अगाडि ठूलो आकारको झण्डा गाड्दैमा मात्र हुँदैन । न त कसैले घरको भित्तामा देशको तस्विर तुर्लुङ्ग भुण्ड्याउँदैमा पुरा हुन्छ । देशभक्ती र देशप्रेम त्यहि भुगोलको माटो कुल्चिनु मात्र होइन । त्यो देशको माटोको सुवास चिन्न सक्नु पनि हो । जुन मेचीपारी जन्मि हुर्केका तुलसी घिमिरेले गरे ।
आफ्नो उमेर जत्तिकै पुरानो नेपाली चलचित्रको इतिहास क्रममा हालसम्ममा तुलसी घिमिरेले २१ वटा चलचित्रहरु निर्देशन गरिसकेकाछन् । बि.सं.२००८ सालमा स्वर्गिय डिबी परियारद्धारा निर्देशित सत्य हरिश्चन्द्र (प्रवासमा निर्मित पहिलो नेपाली चलचित्र) बनेको १४ बर्षपछि बिसं. २०२२ सालमा स्व. हीरासिंह खत्री निर्देर्शित आमा (नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र) पछि भने नेपाली चलचित्र निमार्णले गति लिएको थियो । यसै मेसोमा उत्तिबेलाको बम्बई नगरी छोडेर पिता पूर्खाको बस्ती फिरेका घिमिरे नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा हालसम्मको एक्लो सिल्भर जुब्ली निर्देशक हुन् । उनीद्धारा निर्देशित कुसुमेरुमाल (१९८५), लाहुरे (१९८९) र चिनो (१९९१) नेपालमा रजत जयन्ती मनाउन सफल चलचित्रहरु हुन् ।
दार्जिलिङ्ग शहरको कालिम्पोङ्गबाट हिरो हुने उत्कट अभिलाषा बोकेर बम्बई नगरी छिरेका तुलसी घिमिरेले शूरुका दिनहरुमा भोक भोकै बिताए । रेल–वे स्टेशन र सडकका पेटीहरुमा बिताएका बम्बैया जीवन संघर्षमा उनले एसिस्टेन्ट मेक-अपको काम पाएपछि भने खुट्टा टेक्ने ठाउँ पाए । संघर्षका दिनहरुमा इमान्दारिता र लगनशीलतालाई कहिल्यै नभुलेका उनले जीजी पाटिल र कमलाकर कारखानियाँ जस्ता गुरु पाएपछि जीवनमा अझ आँट र हिम्मत बढ्यो । एक दिन गुरुदक्षिणा लिने क्रममा उनका गुरु कमलाकर कारखानियाँले तेरो “आफ्नो भाषामा १० वटा चलचित्र बनाउँनु” भन्ने गुरुआशिष बोकेर नेपाली रजतपटमा भित्रिएका घिमिरेले आफ्नो गुरुको सम्मानमा दशौं चलचित्र “दक्षिणा”को निर्देशन गरे ।
गुरुआशिष पूरा गरेपछि उनका समकालिन धेरैले बम्बई फर्कन आग्रह गरे । तर उनलाई नेपालको माटो, जनता र पूरै देशले चिनीसकेको थियो । पैशा र बिलासिताको लागि मस्तिश्कले बम्बई रोजे पनि मनले नेपाल छोड्न मानेन । उनीसँगै सहकर्म गरेका उदित नारायण, डेनी डेन्जोङ्पा, बिनोद प्रधान र मुरलीधर लगायतका अन्य अहिलेको बलिउडमा राम्ररी स्थापित भएकाछन् । घिमिरे उनीहरुको सफलतामा नै रमाएकाछन् । अनि आफ्नो कर्मथलो नेपाल र नेपाली चलचित्रप्रति गर्वले बाँचेकाछन् । यसै गरि बाँची रहुन् पनि ।
हामी यत्ति आशा गरौं उनका आगामी चलचित्रहरुमा अझ देशभक्ति झल्कियोस, उनले लेख्ने कथाहरुमा नेपालीपन अझै चुलियोस्, र उनका गीतहरुले देश र स्वाभिमान बोलुन् ।
लाख शुभकामना ।
(बरिष्ठ निर्देशक घिमिेरको स्वागत एवं सम्मानार्थ न्युयोर्कमा एक कार्यक्रमको पुर्व सन्ध्यामा उनकै सम्मानमा यत्ति लेख्न पुगे ।)
उक्त कार्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई चुल्हे निम्तो छ ।
बस् यत्ति ।
(बरिष्ठ चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेको स्वागत एवम सम्मानार्थ रात्रीभोजको लागि प्रचार सामग्री )
(घिमिरेद्वारा निर्देशित पछिल्लो चलचित्र 'दृष्टिकोण' को प्रचार सामग्री )
दृष्टिकोणको 'ट्रेलर' यस्तो छ :
बुधवार, २०७१ आश्विन ०७ गते ०२:२१ / Wednesday, Sep 24, 2014 2:21 am